Kwenzekani uma uMbungazi efuna ukunikezwa yimali yakhe ekhishwa uma isivakashi senze umonakalo? - Isikhungo Sosizo se-Airbnb
Izimali ezikhishwa uma isivakashi senze umonakalo – isihloko sosizo
Kwenzekani uma uMbungazi efuna ukunikezwa yimali yakhe ekhishwa uma isivakashi senze umonakalo? – isihloko sosizo
Kwenzekani uma uMbungazi efuna ukunikezwa yimali yakhe ekhishwa uma isivakashi senze umonakalo?
Izimali ezikhishwa uma isivakashi senze umonakalo
Amadiphozithi ezokuvikeleka angacelwa yi-Airbnb noma ababungazi. Angase asekelwe ezicini zendawo yokuhlala kanye/noma isikhathi okubhukhwe n…
Uma uMbungazi ecela imali eyengeziwe
Yonke imininingwane yamanani ifakiwe uma ubhukha usebenzisa i-Airbnb. Kunemibandela embalwa.
Ukuqongelela amadiphozithi ezokuvikeleka ngaphandle kwenkundla ye-Airbnb
I-Airbnb isingatha wonke amadiphozithi ezokuvikeleka ukuze iqinisekise ukuthi izinkokhelo zezivakashi ziyavikelwa nokuthi Ababungazi banxesh…